बिवाह गरेको १० दिनमा श्रीमतीको यो प्रस्तावले श्रीमानको होस् उ’ड्यो, पुरा पढ्नुहोस ! « गोर्खाली खबर डटकम
बिवाह गरेको १० दिनमा श्रीमतीको यो प्रस्तावले श्रीमानको होस् उ’ड्यो, पुरा पढ्नुहोस !
बिहारबाट एक अनौंठो घ’टना देखा पर्यो। । यहाँ एक श्रीमानको होश उ’ड्यो जब उनको भर्खँरै विवाह भएको श्रीमतीले उनलाई भनिन कि म तिमीलाई माया गर्दिन तर सपना नामकी केटीलाई माया गर्छु र उनीसंग मेरो जीवन बिताउन चाहन्छु । वास्तवमा यो घ’टना बिहारको बेगूसरायको हो । जुन १४ मा, रांची निवासी पूजाले बेगूसराय निवासी अंकित कुमारसँग परिवारका सदस्यहरूका बीच सँग विवाह गरिन् ।
विवाहपछि पूजा आफ्नो पतिसँग बेगूसराय आइन् तर १० दिन पछि उनले आफ्नो श्रीमानसँग बस्न इन्कार गरिन् । पूजाले भनिन्, ‘दुई बर्षदेखि म सपना नामकी केटीसँग समलिङ्गी जीवन बिताइरहेको थिएँ र उनीसँग बिहे गर्न चाहन्थें ।’ यो सुनेर अंकित आश्चर्यमा परे र पुलिसलाई सूचना दिए । यसपछि प्रहरीले दुबैलाई चौकी बोलायो र तर पूजाको प्रेमिका सपना रांचीबाट बेगूसराय पुगिसकेपछि पुलिस स्टेशन गइन् र उनको प्रेमिकालाई आफूसँगै बस्न भन्यो ।